လတ်တလောကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရပေမယ့်လဲ ကိုယ်တိုင်လဲ အားတင်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး – Suehninsi
အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်သောကနည်းစေဖို့ တတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကနေ ကူညီနေကြပြီး ဒီကနေ့မှာတော့ အကယ်ဒမီ ဖွေးဖွေးက ပရိသတ်တွေအတွက် ကရုဏာပို့စ်လေးတစ်ခုကို အခုလိုပဲ မျှဝေပေးထားပါတယ်။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာတွေ တိုးပွားလာခဲ့သလို ပြည်သူလူထုတွေကလည်း
စိုးရိမ်စိတ်တွေကြီးလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကရုဏာပို့စ်ပါရှင်။ ကမ္ဘာကြီး​နေမ​​ကောင်းဘူး။ ထပ်တိုးခံစား​နေရတဲ့သူတဦးတ​ယောက်ချင်းစီတိုင်း အား​တွေရှိပြီး အမြန်ပြန်တိုက်ထုတ်​ကောင်းမွန်လာပါ​စေ။ ချစ်တဲ့သူ​တွေနဲ့ ပြန်​တွေ့ရ​တော့မှာပါလို့။ အားလုံး သတင်း​တွေ​ကြောင့် စိတ်ညစ်​နေပြီလား? ​ဖွေးလဲပဲ အားတင်း​ထားပါတယ်။ ဖွေးတို့ အားလုံးထက်သတ္တိရှိ​ပေးသူများအားလုံးကိုလဲ
​လေးစားပါတယ်ရှင်။ It can be you. It can be me. It can be anyone.We are taking care but we never know. So Let just be kind and show love to each other. I Love You all …💪✨Fightinggg” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေထားပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ
စိတ်သက်သာရာရစေဖို့ ခွန်အားပေးစကားလေး ပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အားလုံးလည်း တတ်နိုင်ရင် လူစုလူဝေးကို ရှောင်ရှားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် နေကောင်းကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်ကြပါနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အနုပညာရှငျတှအေနနေဲ့လညျး ပွညျသူတှေ စိုးရိမျသောကနညျးစဖေို့ တတျနိုငျတဲ့နညျးလမျးတှကေနေ ကူညီနကွေပွီး ဒီကနမှေ့ာတော့ အကယျဒမီ ဖှေးဖှေးက ပရိသတျတှအေတှကျ ကရုဏာပို့ဈလေးတဈခုကို အခုလိုပဲ မြှဝပေေးထားပါတယျ။ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ရောဂါကူးစကျခံရတဲ့ လူနာတှေ တိုးပှားလာခဲ့သလို ပွညျသူလူထုတှကေလညျး
စိုးရိမျစိတျတှကွေီးလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ “ကရုဏာပို့ဈပါရှငျ။ ကမ်ဘာကွီးနမေကောငျးဘူး။ ထပျတိုးခံစားနရေတဲ့သူတဦးတယောကျခငျြးစီတိုငျး အားတှရှေိပွီး အမွနျပွနျတိုကျထုတျကောငျးမှနျလာပါစေ။ ခဈြတဲ့သူတှနေဲ့ ပွနျတှရေ့တော့မှာပါလို့။ အားလုံး သတငျးတှကွေောငျ့ စိတျညဈနပွေီလား? ဖှေးလဲပဲ အားတငျးထားပါတယျ။ ဖှေးတို့ အားလုံးထကျသတ်တိရှိပေးသူမြားအားလုံးကိုလဲ
လေးစားပါတယျရှငျ။ It can be you. It can be me. It can be anyone.We are taking care but we never know. So Let just be kind and show love to each other. I Love You all …💪✨Fightinggg” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ မြှဝထေားပါတယျ။ ဖှေးဖှေးကတော့ သူမရဲ့ ပရိသတျတှေ
စိတျသကျသာရာရစဖေို့ ခှနျအားပေးစကားလေး ပွောလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှေ အားလုံးလညျး တတျနိုငျရငျ လူစုလူဝေးကို ရှောငျရှားပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ နကေောငျးကနျြးမာအောငျ ဂရုစိုကျကွပါနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။